China USB-C docking station socket ine waya isina waya vanogadzira uye vatengesi |Wellink
USB-C docking station socket ine wireless charger
usb-c docking station socket ine waya yekuchaja, 15w isina waya yekuchaja, yakawanda-port kuwedzera, multi-nyika universal socket, one socket multi-country plug, 100V-250V magetsi socket, 15w isina waya yekuchaja, 65w Type-C inokurumidza kuchaja pasina kupisa. , 5G bps Transfer rate pasekondi, SD/TF kadhi, tsigiro 2T yakakura-inokwana memori kadhi kuverenga, kaviri uye kaviri kuverenga.Batanidza kune hombe skrini, HDMI 4K HD.
SD & TF Kadhi Slots
Verenga SD uye TF makadhi panguva imwe chete, Tsigira makadhi anosvika 512GB
Inoshanda neSD, SDHC, Micro SD, MMC, SDXC uye mamwe makadhi anosvika 2TB yekuchengetedza.Inotsigira UHS-I, kufambisa data kumhanyisa kusvika 480 Mb/s, pasina kufinha kumirira mafaera makuru kutamiswa.
USB 3.0 Ports inogona kutamisa mafaera ako nekukurumidza kusvika ku5Gbps, pasi inoenderana ne USB 2.0 uye pazasi.
Ikubvumidza kuti ubatanidze kiibhodhi, Mouse, hard drive, U Disk, nezvimwe kune chako kifaa.
100v-250vACmagetsi socket, inoenderana nenyika dzakawanda kana matunhu plugs.
Zvakapfuura: 120w Gallium Nitride adapta ine akawanda plug (yemadziro & desktop)
Zvinotevera: 15w isina waya yekuchaja ine magineti